EMule Servers 2021 - eMule အတွက်စိတ်ချရသောဆာဗာများစာရင်း Gadget သတင်း
ပါပလော Aparicio | | Software များ
အဆိုပါဒဏ္myာရီ eMule ၏ပုံရိပ်
သင့်တွင်အဆင့်မြှင့်ထားသောစာရင်းမရှိပါ emule ဆာဗာများ? မင်း emule မှာပြproblemsနာရှိလား။ ဆာဗာစာရင်းအားအခါအားလျော်စွာရှင်းလင်းပါသလား။မင်းရဲ့ emule အတွက်ဆာဗာတွေကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲမသိဘူးလား စိတ်မပူပါနဲ့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြထားတဲ့အဆင့်ဆင့်လက်စွဲစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် eMule အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက eMule ဆာဗာများ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုသည်အလုပ်မဖြစ်တော့ (သို့) စိတ်မချရသောသူများဖြစ်ကြောင်းသင်သိသည်။ ဒီမှာ eMule ကိုဘယ်လို configure လုပ်မလဲဆိုတာပြမယ် 2017 အတွက်စိတ်ချရသော Emule ဆာဗာများ.
1 eMule ဆာဗာများကိုပြုပြင်ရန်လမ်းညွှန်
2 eMule ကို restart မလုပ်ပဲဆာဗာများကိုဘယ်လို update မလဲ။
3 eMule ဆာဗာများကိုကိုယ်တိုင်ထည့်ပါ
4 emule မချိတ်ဆက်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
5 2017 Emule ဆာဗာများစာရင်း
6 eMule အတွက်သိကောင်းစရာများ
7 eMule ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲ။
8 အသစ်ပြောင်းထားသော IP filter ကိုသုံးပါ
9 eMule နှင့်အတူ torrent download လုပ်နည်း
10 eMule ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်ဗွီဒီယို
11 eMule ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
11.1 Windows အတွက် Emule 10
11.2 Mac အတွက် Emule
13 eMule အတွက်ရုပ်ရှင်တွေဘယ်မှာရနိုင်မလဲ
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် အဆိုပါ eMule ဖွင့်လှစ် နှင့် Preferences> Server အပိုင်းသို့သွားပါ။ ဤအချိန်တွင်အထက်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါကွက်လပ်များကိုအမှတ်အသားပြုရမည်။
အော်တိုမွမ်းမံ server server ကို အစမှာ
Smart ID ထိန်းချုပ်မှု
လက်ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသောဆာဗာများကို ဦး စားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ပါ
ယခု လက်ခံမှုခလုတ်ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲ ကပြောပါတယ်ဘယ်မှာကျနော်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ ပြင်ဆင်ရန်။ ဆာဗာအသစ်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်မှတ်စုစာအုပ်သည် ၀ င်းဒိုးအသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာကပေါ်လာသောအရာ (၎င်းသည်ကွက်လပ်မရှိပါက) ကိုပယ်ဖျက်ပြီး http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်သည်။
သင် notepad ပြောင်းလဲမှုများသိမ်းဆည်း သင်ပိတ်လိုက်သည် ထိုအခါ Apply and OK ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ နှင့် eMule preferences ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ပါ။
အကောင်းဆုံး torrent client
eMule ကို restart မလုပ်ပဲဆာဗာများကိုဘယ်လို update မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် eMule ကိုပိတ်ရန်နှင့်ဖွင့်ရန်ဆာဗာများကိုမွမ်းမံလိုပါကအောက်ပါတို့ကိုလုပ်နိုင်သည်။
eMule ၏အဓိကမျက်နှာပြင်တွင် URL မှ Update Server.met ဆိုသောအကွက်တစ်ခုရှိသည်။ စာသားအကွက်ထဲရှိ http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met ကိုကူးယူပြီးကူးထည့်ပြီး update ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအ voila, သင်ပြီးသားရှိသည် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဆာဗာများရှိ eMule.
သငျသညျလိုလျှင် အချို့သော eMule ဆာဗာများကိုထပ်ထည့်ပါ သင်လုပ်ရမှာက tab ကိုနှိပ်ပါ ဆာဗာအသစ်။ IP, port နှင့် eMule server ၏အမည်ကိုထည့်နိုင်သည့် window အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
သင်စိတ်မချရသော eMule ဆာဗာကိုဘယ်သောအခါမျှလက်ဆင့်ကမ်းရန်အရေးကြီးသည်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် ဇန်နဝါရီလ 2017 အဖြစ် eMule ဆာဗာစာရင်း အပြည့်အဝအာမခံချက်နှင့်အတူ။
မည်သည့်အစီအစဉ်သည်အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဖြစ်စေမိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ eMule မချိတ်ဆက်ပါကကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးမည် -
ဆော့ဗ်ဝဲကိုမဆက်သွယ်တဲ့အခါ (သို့) ၄ င်း၏ဆက်သွယ်မှုဟာအရင်ထက်နှေးနေရင်ငါလုပ်ရမယ် မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု။ ဝဘ်ကိုငါယုံတယ် ပိုက်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းမရှိစေရန်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် (လေးလံသောမဟုတ်) ကို ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။
ဒါဟာအစကအရေးကြီးတယ် အဘယ်သူမျှမ software ကို eMule ပိတ်ဆို့ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးမဟုတ်သော်လည်း operating system update တစ်ခုသည် firewall rules များကိုပြောင်းလဲစေပြီး update မလုပ်မီပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသောအရာအားစတင်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ eMule မချိတ်ဆက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် firewall settings ကိုသွားပြီး၎င်းအားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ရန်ကူညီနိုင်သည့်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် ပြောင်းလဲမှု server ကို။ ဆာဗာများပြိုကျနိုင်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားဆာဗာကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါသကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်
အဆိုပါလားအလွန် capricious သည်နှင့်မည်သို့နှင့်ဘယ်အချိန်မှာလိုသည်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်အသုံးပြုသည့် ports ကိုဖွင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ router ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေသော router တွင်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
2017 Emule ဆာဗာများစာရင်း
အင်တာနက်သည် eMule ဆာဗာများပြည့်နှက်နေသော်လည်းဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သောသူများကိုသာပြသပါမည်။
eMule လုံခြုံရေး n1 -> ed2k: // | ဆာဗာ | 91.200.42.46 | 1176 | /
eMule လုံခြုံရေး n2 -> ed2k: // | ဆာဗာ | 91.200.42.47 | 3883 | /
eMule လုံခြုံရေး n3 -> ed2k: // | ဆာဗာ | 91.200.42.119 | 9939 | /
eMule လုံခြုံရေး n4 -> ed2k: // | ဆာဗာ | 77.120.115.66 | 5041 | /
တီဗီမြေအောက် ---> ed2k: // | server ကို | 176.103.48.36 | 4184 | /
အသားတင်ဆာဗာ -> ed2k: // | server ကို | 46.105.126.71 | 4661 | /
ဤစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်သောဆာဗာကိုအသုံးမပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည်အကျင့်ပျက်ပြားသောဖိုင်များသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပြည့်နေသောပရိုဂရမ်ပါရှိသောဆာဗာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အပြည့်အ ၀ မယုံကြည်ရသော eMule server ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်.
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တိကျတဲ့ဆာဗာကို ဦး စားပေး (ဥပမာအားဖြင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သော) ညာဘက်ခလုပ်> ဦး စားပေး> အမြင့်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပေါ်ကပုံမှာသင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ထိုနည်းတူစွာပင်သင့်အတွက်အဆိုးဆုံးအလုပ်များအတွက်သင် ဦး စားပေးမှုနိမ့်နိုင်သည်။
ဆာဗာတစ်ခုကိုရှာဖွေသောအခါမည်သူရှိသည်ကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးဝင်သည် အသုံးပြုသူအချိုးဆုံး Ping နံပါတ်.
အခါအားလျော်စွာဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာမှာသင် eMule ၌ဆက်သွယ်မှုဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် Preferences> Connection ကိုနှိပ်ပြီးအကွက်ကိုသာနှိပ်ပါ ဆက်သွယ်မှုကိုဆုံးရှုံးတဲ့အခါပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ.
အသစ်ပြောင်းထားသော IP filter ကိုသုံးပါ
လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်အသစ်ပြောင်းထားသော IP filter ကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည် Preferences> Security နှင့်သွားရန်လိုအပ်သည် Filter ဆာဗာများ box ကိုစစ်ဆေးပါ။ ထိုအခါ၏ box ထဲမှာ URL မှအသစ်ပြောင်းခြင်း အောက်ပါ URL တွင်သင် http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/ipfilter.zip တွင်ထည့်ပါ။
ထိုအခါ လွှတ်တင်ခြင်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ နောက်ဆုံး Apply နှင့် OK ကိုနှိပ်ပါ။
အဲဒါအရမ်းအရေးကြီးတယ် ဘယ်တော့မှ update မလုပ်နဲ့ ဦး တည်ချက်ကနေ http://gruk.org/list.php.
ထိုအနှင့်အတူ eMule ဆာဗာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိသောအသုံးပြုသူများအတွက် eMule အားမည်သို့တပ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုလေ့လာမည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြတော့မည်။
eMule နှင့်အတူ torrent download လုပ်နည်း
အိုကေ။ အကယ်၍ သင်သည် eMule အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည် .torrent ဖိုင်များကို download လုပ်သည်မဟုတ်ဘူး၊ ကောင်းပြီမဟုတ်ပါ၊ ဤအရာကိုအလွန်သတိထားပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကကွန်ယက်ပေါ်တွင် eMule 0.60 ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သီအိုရီအရယခုအချိန်အထိနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင် eMule ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားလျှင်နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version သည် ၀.၅၀ ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ?
ဖြစ်ပျက်နေသောအချက်မှာတတိယမြောက် developer သည် eMule သည်မြန်ဆန်စွာတိုးတက်မှုမရှိဟုယူဆသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် torrent များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ဒီဆော့ဖ်ဝဲရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းတွေကို eMule လို့မခေါ်တော့ဘူး eMuleTorrent.
ဒီရှင်းပြချက်နဲ့အတူ၊ သူတို့ကဒီဆော့ဗ်ဝဲကို install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့၊ အကယ်လို့သင်ဟာaကိုအသုံးပြုဖို့စိတ်မပူပါကတာဝန်ရှိတယ် ကြော်ငြာနှင့်အတူ eMule ဗားရှင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်ပါဝင်နိုင်သည်အောက်တွင် .MuTorrent ဖြင့် .torrent ဖိုင်များကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြပါမည်။
သွားကြည့်ရအောင် စီမံကိန်းစာမျက်နှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system အတွက် Windows (MacOS) ကို download လုပ်ပါ။
ယုတ္တိနည်းအရ၊ နောက်တစ်ဆင့်မှာယခင်အဆင့်တွင် download လုပ်ထားသောဖိုင်ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဘာမှဖြစ်မလာသေးသော်လည်းတရား ၀ င်မဟုတ်သောဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်မည်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်မံသတိရမိပါသည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ .magnet လင့်များသို့မဟုတ် .torrent ဖိုင်များဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ငါလုပ်မည်မှာနောင်တွင်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် .magnet link များနှင့် .torrent ဖိုင်များကို eMuleTorrent နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဒီလင့်ခ်များ (သို့) ဖိုင်များအတွက်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေရန်။ .torrents အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များစွာရှိသည်။ နည်းသည်။ နည်းသည်။ ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာကအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူပြီး ၄ င်းကို double click နှိပ်၍ eMuleTorrent နှင့်ချိတ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ .torrent ဖိုင်များနှင့်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါကမည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်မည်ကို၎င်းပေါ်တွင် right click နှိပ်၍ preference များကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲရပါလိမ့်မည်။
ပြီးရင်အင်တာနက်ပေါ်က torrent တစ်ခုကိုရှာမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောအရာသည် .torrent ဖိုင်ဖြစ်ပါကထိုပုံကိုသင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း eMuleTorrent သို့ဆွဲယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောအရာသည် .magnet link ဖြစ်ပြီး၎င်းကို၎င်းတို့သည် eMuleTorrent နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက၎င်းကိုနှိပ်လိုက်လျှင်၎င်းသည် eMuleTorrent တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ဒီက eMule ဗားရှင်းမှာကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရှိတယ်၊ သင်ကံကောင်းပါစေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့မှုများစွာရှိသော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနောက်ဆုံးအဆင့်သည် eDonkey ကွန်ယက်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မည့် download တစ်ခုပြီးမြောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ယူဆသည်။
သင် eMule ကိုသွင်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းပြproblemsနာများရှိပါကဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည် ဗွီဒီယိုတစ်ဆင့်ချင်းစီ ဒီလူကြိုက်များတဲ့ download manager ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
eMule ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
P2P Downloader eMule အခမဲ့ဖြစ်သည်သင်၏စီမံကိန်းကပိုင်ဆိုင်လျှင်ပင် (၎င်းသည် open source မဟုတ်ပါ) ။ ၎င်းကိုစီမံကိန်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရယူနိုင်ပါသည် ဒီ link ကို.
ဒီနှင့်အတူ, ဝက်ဝံရှင်းပြခဲ့သည် တရား ၀ င်မဟုတ်သောဗားရှင်းများကိုသတိပြုပါ။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်တရားဝင်မဟုတ်သော eMuleTorrent ကဲ့သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချို့သည်၎င်းကိုအသစ်တင်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လှူဒါန်းနိုင်သည်။ သို့သော် eMule ၏တရားဝင်မူကွဲသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Windows အတွက် Emule 10
မေ့ Windows 10 အတွက်တိကျသော eMule ဗားရှင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်ဤအချက်ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမှုဖြင့်ဖတ်ရှုနေပါက၎င်းသည် eMule သည် Microsoft ကွန်ပျူတာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် operating system ဗားရှင်းကိုမွမ်းမံသောအခါပြproblemsနာများကိုစတင်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Windows 10 သည်ယခင်နှင့်နှိုင်းစာလျှင်ပိုမိုလုံခြုံသည် Windows ဗားရှင်း။
စနစ်တကျကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာစနစ်၏ firewall ရွေးချယ်စရာများနှင့်ဖြစ်သည် ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို eMule ခွင့်ပြုပါ။ သို့တိုင်၊ စနစ်သည် software ကို back back တံခါးတစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Mac အတွက် Emule
Mac အတွက်တရားဝင် eMule ဗားရှင်းလည်းမရှိပါ။ တရားမ ၀ င်ဗားရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ eMuleTorrent ဒါမှမဟုတ် open source option aMule တို့ရှိတယ်။
Mac ပေါ်တွင် eMule ကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာ Wine ကဲ့သို့သော emulation software ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ Ubuntu မှ (PlayOnLinux မှ eMuleTorrent) ၏ဖန်သားပြင်များကိုငါယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးမပြုလို။ open source ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုလိုသောသုံးစွဲသူများသည်အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည် Linux သုံးစွဲသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတိအကျဖြစ်သည် - MacOS နှင့် Linux အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော open source version ။
၎င်းသည် Windows အတွက်တရားဝင်ဗားရှင်းကဲ့သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိဟုသင်ပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားတစ်ခုလုံးကိုပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဗားရှင်းတစ်မျိုးတည်းတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်သတင်းများထည့်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလတွင်မူ 2.3.2 ဖြန့်ချိခဲ့သည် များစွာသောတိုးတက်မှုများ, အထူးသဖြင့် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
Ubuntu-based Linux ဗားရှင်းကိုသင်သုံးသည်ဆိုလျှင် aMule ကို install လုပ်ခြင်းသည် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး command ကိုရိုက်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ sudo apt ထည့်သွင်း amule –y (ကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးနောက်အတည်ပြုချက်တောင်းခံစရာမလိုဘဲထည့်သွင်းရန်“ -y” ဖြစ်ခြင်း) ။ မရရှိလျှင်, သင်သည်သင်၏အမြဲတမ်းဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်း၏ကုဒ်ကိုကူးယူပြီး Linux နှင့် MacOS နှစ်ခုလုံးတွင်ထည့်ပါ။
eMule သည်ကစားသမားမဟုတ်သကဲ့သို့ eMule အတွက်ရုပ်ရှင်များလည်းမရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ eMule သည်ကစားသမားတစ် ဦး မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းကဲ့သို့သောမေးခွန်းလည်းဖြစ်သည်။ မင်းသိချင်တာက eMule ဖြင့်ရုပ်ရှင်များကိုကူးယူရန်လင့်ခ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း.
ဒီလင့်ခ်ကိုခေါ်ပါတယ် eD2k လင့်များသို့မဟုတ် eLinks သူတို့ကိုအောက်ပါကဲ့သို့စာမျက်နှာများတွင်သင်ရှာနိုင်သည်။
သင်ပိုမိုသိလား Emule အတွက်ဆာဗာများ? ဤ P2P သုံးစွဲသူမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်မှအကြောင်းအရာများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင်အသုံးပြုမည့်သူများနှင့်မှတ်ချက်ပေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » EMule ဆာဗာများ
Ivana carina ဟုသူကပြောသည်
အာဂျင်တီးနား Patagonia မှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။
Ivana Carina သို့ပြန်သွားပါ
Killer ရှလကာရည် ဟုသူကပြောသည်
@Senovilla သင်သည် emule အတွက်ဆာဗာအသစ်များကိုသူတို့ထွက်ခွာတိုင်းရှာရန်သည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်မသိပါ။
@ KAD အတွက်ယေရှုကောင်းပြီဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး🙁
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်များအတွင်းဆာဗာများနှင့်ပြproblemsနာများဖြစ်ပွားခဲ့သောဆာဗာများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒီကနေဒီကနေတစ် ဦး emulator ဟုသူကပြောသည်
၀ န်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းမမေ့ပါနဲ့။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆာဗာများမရှိသေးပါ။ နွေရာသီ မှစ၍ gruk.org စာရင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ edonkey ဆာဗာ ၁ သည် IP ကိုပြောင်းလဲပြီးပြန်ဖွင့်ထားသည်။ သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာနည်းနည်းလေးမှနည်းနည်းလေးမှရတော့မယ်။ Kademlia ကွန်ယက် (KAD) ကိုသာသီးသန့်အသုံးပြုပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤနည်းဖြင့်ပြုလျှင်အချိန်တိုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဗာများနှင့်၎င်းတို့အားအန္တရာယ်ရှိသော IP များနှင့်သူလျှိုများဖြင့်ကူးစက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောသူများမှဖြတ်သန်းသွားနိုင်လိမ့်မည်။
ဒီကနေဒီကနေ An emulero မှ Reply
ဘယ်လောက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ချရန်မပေးပါ။ ယခုစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်အဆင်ပြေလျှင်ကျွန်ုပ်အောင်မြင်နိုင်လျှင်ပြောပြပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကူညီပါ!!!!!!!!!!!!!!! ဆာဗာများမရှိပါ။ တစ်ခုသာရှိပါသည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းပြည့်နေပါသည်။
ဆာဗာများကို KAD ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းသာမထားပါနှင့်
ငါ့ကိုစပျစ်ဥယျာဉ်လုပ်ကြံသူအားပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ EMULE 2009 ကိုလွှင့်ထုတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏တေးသီချင်းကိုနားထောင်ရန်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှကျွန်ုပ်အတွက်မရှိပါ။ ...
ငါ့ကိုပြန်ပြောပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်ဒီကိုချချနိုင် ????? KISS ANGELICA
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူတို့တွေဟာနည်းနည်းလေးမသိတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာဆာဗာများပြaနာရှိနေပါတယ်။ တစ်ခုသာရှိပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်တော်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဘာလုပ်လို့ရလဲ။
ရို Vera Garcia က ဟုသူကပြောသည်
Rosa Vera Garcia သို့စာပြန်ပါ
Emule ??, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲ emule ကိုသုံးပါသလား ??? xDD ။
အသက်ရှည် RAPIDSHARE !!!!
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ post ကို
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! အလွန်အသုံးဝင် !!!
ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီပေးချင်ပါတယ်။ emule plus ကို download လုပ်ခဲ့ပြီး ၄ င်းမှာဆာဗာ ၃ ခုသာရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ဦး စားပေးမှုများသို့သွားပြီးလုံခြုံရေးလည်းမရှိ၊ မည်သည့်အရာမျှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲတစ်စုံတစ် ဦး ကဆာဗာများထပ်မံထည့်နည်းကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်သည်
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသြစတြေးလျ၊ Peerates၊ eDonkeyServer N.3 ဆာဗာ (၃) ခုကညွှန်ပြနေပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ Razorbach2အများကြီးသုံးပါတယ်။ ဒီတစ်ခုထဲကိုငါနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချမှုသိပ်မရှိဘူး။ လမ်းမရှိဘူး ငါဤ 4.0 ကိုသာသုံးနိုင်သည်။ အခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဒီဆာဗာတွေသာရနိုင်မလား။ ငါရုပ်ရှင်တွေကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ကိုကြောက်တယ်
1Tera USB ပြင်ပ disk ကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်ယူကေ ၉၇ နဲ့အတူသူ့ရဲ့ဆယ်စုနှစ်လို့ခေါ်တဲ့ His Gracious Majesty အခွန်အပါအ ၀ င်ကျွန်တော်ဟာအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်၊ မင်းငရဲသွားရင်တောင်မှသင်ပေးဆပ်ရမယ်၊ ၄၀၀GB မှာ ၀ မ်းသာရမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ ဒီယူနစ်အသစ်၏ Temp လမ်းညွှန်မှအစိတ်အပိုင်းများဖိုင်တွဲများကို ၃ ပတ်နှင့်အထက်နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ (သို့) ထို့ထက်ပိုသော (ဖိုင်မူပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားသော) ဖိုင်များအားမပြတ်တမ်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားသည်။ Emule, navigation နှင့်ငါ့ကိုဘွားသောမိခင်။ ထိုအခါငါ 97k uninstall လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ပြီးနောက် Emule, တစ်ဝက်ကောင်းစွာနေဆဲဖြစ်သည်။
Emule မှာတစ်ခုခုရှိလား၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မက PC ကိုရပ်တန့်ပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲထည့်ပြီးပြီလား။ 100 တပြိုင်နက်တည်းဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းအများကြီးသုံးစွဲသည်။
ကျွန်ုပ်ထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီလက္ခဏာမှာကျွန်ုပ်သည် Emmon the vsmon, firewall နှင့်နို့သည်စအက်လာသောအခါ၊ အချုပ်အားဖြင့်၎င်းသည် taskmonitor ကိုလျစ်လျူရှုသောကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပါ။
ယခုငါ Emule ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးသောအခါသူသည် ဦး နှောက်သေသကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဖိုင်များကို တင်၍ မဒေါင်းလုပ်သည်သာမကကျွန်ုပ်မျှဝေသောဖိုင်များ (ကျွန်ုပ်၏ခရီးများနှင့်ကျွန်ုပ်တောက်ပသော spiel အနည်းငယ်) ကိုသာသိမ်းသည်။
ကောင်းပြီ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤအဆုံးနဲ့တူ terminal ကိုအမှုပေါင်းဘယ်လောက်သိကြပုံပါဘဲ။ ငါ "ပြိုလဲမသိသော" အမျိုးအစားတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းထက်ကျော်လွန်သွားမည်မဟုတ်; ဒါပေမယ့်သူရဲကောင်းလား၊ အာဇာနည်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူး၊ အဲမလလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပဲ။ ငါတို့မျှဝေချင်တယ်။
ဒါအများကြီးပိုကောင်းတာပေါ့ ငါ emule client သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် "Temp" လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုသိမ်းဆည်းပါကပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီအခြေအနေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အတည်ပြုပြီးပါပြီ
ကျွန်တော့်အမှု၌၊ ပြproblemနာကကျွန်ုပ်တို့၌ "hashing" လုပ်နေသောပြန်လည်ထည့်သွင်းထားသော Emule ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည့် "Temp" တွင်ဖိုင်များစွာရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ အဲဒီမှာများလွန်းခဲ့ကြပြီးကွန်ပျူတာပေါ်မှာချိတ်ဆွဲလိမ့်မယ်။
ယခုငါ Preferences> Directories> Temporary files များတွင် "Temp" အသစ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီ directory အသစ်ကို "temp" အဟောင်းရှိဖိုင်အားလုံးကိုကူးယူပြီးပါပြီ။ packages များဖြင့်: သူတို့ကို windows explorer တွင်အမည်နှင့်အမိန့်ပေးပြီးအတည်ပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို Temp အသစ်သို့အုပ်စုလိုက်အနေဖြင့်၊ အတူတူစဖွင့်သောသူတိုင်းကိုအချိန်တိုင်းပို့ဆောင်ရန်သတိထားပါ၊ ဥပမာအားဖြင့်, 1001.part, 1001.met, 1001.met.bak, 1001.settings နှင့် 1001.stats ။ ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ၊ အနည်းဆုံး၊ .part (အစစ်အမှန်ဖိုင်) ဖြင့်အဆုံးသတ်သောအရာနှင့် .met (အဆုံးသတ်နိမ့်ကျသောဖိုင်၏ကူးယူထားသည့်ဖိုင်၏ဖိုင်တွင်အဆုံးသတ်သောအစဉ်အမြဲရှိသည်)၊ ဥပမာ); ငါသည်လည်း .met.back အဆုံးသတ်သောအရာကိုတွေ့ပြီ (ကချိုးဖောက်လျှင် .met ဖန်ခွက်ဖြစ်လို့ယူဆတယ်) ။
အကျဉ်းချုပ်ယခုကျွန်ုပ်သည် Emule တွင်ပျော်မွေ့စရာဒေါင်းလုပ်အခြေအနေ (ပြန်လည်ရယူရန်ဖိုင်များ၏စာရင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများအဆင်ပြေစွာ) ပြန်လည်ရရှိရန်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဆာဗာများမပါ ၀ င်ဘဲ Kad ကွန်ယက်ကိုသာချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ပြောသောစကားများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်မှုပေါင်း (၁၀၀ ကျော်) ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာက၎င်းကိုမထောက်ပံ့သောကြောင့် Emule ကိုယ်တိုင်ကထိုအချိန်ကဖွင့်ခဲ့သောဖိုင်များကိုပျက်စီးခဲ့သည်။
ကောင်းသောဆာဗာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း၊ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကရှင်းပြနိုင်မည်လား။
ကျွန်ုပ်သည်ဆာဗာများကိုကောင်းမွန်စွာအဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် eMule ကို (၂) နှစ်နီးပါးအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းများ
မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မင်းငါ့ဘ ၀ ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်
Miguel Gaton ဟုသူကပြောသည်
Miguel Gaton အားပြန်ပြောပါ
Jose Andres ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် downloads များမရပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
jose andres အားပြန်ကြားပါ
ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အသေ XDD ထားခဲ့ပါ
KAD ကွန်ယက်သည်ကမ္ဘာအတွက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ ငါအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့, ရလဒ် = ဘာမျှမ။ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်စုံတစ် ဦး ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းတစ် ဦး အကြံပြုချက်ရှိပါတယ်
Tavo Penarol ဟုသူကပြောသည်
ငါ chimera 2.0 ကို eMule v0.50a ကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုပြီး၎င်းသည် KAD ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါက
emule, ယနေ့ယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေသည်။ ယုတ္တိတန်စွာဖွင့်လှစ်ထားသော ports၊ kad network၊
ဒီဟာသုံးနေတုန်းပဲလား။ ငါထင်သည်ရုံ Ares haha ​​ကဲ့သို့မျိုးသုဉ်းခဲ့သည်ထင်
ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လို format လုပ်မလဲ